15 Feb 15, 2013 - 12:24:32 PM
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxman Maxamad Farole oo ka hadley caawa 15 Feb,2013 dilkii waxashnimada ahaa ee loo gaystey galabta alaha u naxariistee Shiikh Cabdulqadir Nuur Farax ayaa xaqiijiyey in ciidamada amniga gacanta ku hayaan qofkii gaystey dilkaas.
Madaxweynaha Puntland ayaa dilkaan ku eedeeyey kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab isagoo xusey in ciidamada amniga gacanta ku hayaan gacan ku dhiiglaha.
Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax ayaa galabta 15 Feb, 2013 lagu diley masjid gudihiis kaasoo ku yaala bartmaha magaalo madaxda Puntland ee Garowe isagoo markaas tukanaya salaada casar.
Shaqaalaha Garowe Online iyo Radio Garowe ayaa tacsi u diraya Sheekh Cabdulqaadir anaga oo leh samir iimaan ha ka siiyo eheladiisa iyo dhamaan shacabka Puntland meel kasta ay joogaan,anagoo leh jana fardowza ilaahey ha ka waraabiyo. Aamiin...Amiin.
Dhageyso wareysiga Madaxweynaha Puntland Cabdiraxman Farole